Hoy Dr. Dickenstein ilay mpandresy amin’ny loka l’Oreal-UNESCO ho an’ny Vehivavy ao amin’ny Siansa hoe “Zohio ny Zava-tianao fatratra” · Global Voices teny Malagasy
Resadresaka nifanaovana tamin'ilay matematisiana Arzantiniana notolorana ny loka L'Oreal-UNESCO
Nandika (en) i Maria Victoria De Lallana
Voadika ny 25 Jona 2021 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Esperanto , Français, polski, Español
Sary natolotr'i Dr. Alicia Dickenstein, nahazoana alàlana.
Efa nisy hatrizay ny vehivavy ao amin'ny siansa sy ny fandraisany anjara na dia nanafina izany aza ny tantara. Mpahay fizika, simia, biolojia, fitsaboana ary matematika — ankoatra ny taranja hafa — toa ny an'i Dr. Alicia Dickenstein.
Dr. Dickenstein, izay nantsafaintsika eto, dia iray amin'ireo vehivavy dimy notoloran'ny Fondation L'Oréal sy ny UNESCO loka iraisam-pirenena L'Oréal-UNESCO ho an'ny Vehivavy ao amin'ny Siansa noho ny asany tamin'ny fitrandrahana ny jeometria aljebraika eo amin'ny sehatra biolojia molekiolera.
Mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Buenos Aires izy ary nitana andraikitra lehibe teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena momba ny matematika sy siansa, manampahaizana manokana amin'ny famaritana ireo maodelin'ny matematika informatika.
Ohatra, tsikariny ny firafitra matematika misongadina tamin'ny làlam-panazavana malaza maro, izay nomeny anarana hoe “Sistema MESSI” (Modifications of type Enzyme-Substrate or Swap with Intermediates), pi-maso ho an'ilay mpilalao baolina kitra Arzantina fanta-daza Lionel Messi. Manampy ny biolojista hampandroso ny fikarohana ataony amin'ny alàlan'ny maodely matematika ity rafitra ity. Izay ihany koa no mpanoratra ny Matemax, boky fianarana matematika amin'ny fiteny roa ho an'ny ankizy sy ny tanora.
Nahitsy mba hazava kokoa ny resadresaka.
Lucía Leszinsky: Tamin'ny taona 1982 no nahazoanao ny mari-pahaizana Docteur momba ny Matematika tao amin'ny Oniversiten'i Buenos Aires. Inona no nanosika anao hanatanteraka ny asanao amin'ny tontolon'ny matematika?
Dr. Alicia Dickenstein: Tsy nahalala aho fa misy ny asa momba ny matematika. Tiako ny matematika, nohazavaiko tamin'ny mpiara-mianatra tamiko izany, anefa ny fampianarana no tiako nianarana, na ny tena marina, tsy fantatro izay tiako hatao. Tamin'ny taom-pianarana farany tany amin'ny lisea dia nanaiky ny hanao fitsapam-pahaizana arak'asa avy amin'ny mpampianatra filozofia sy pedagojia Elida Leibovich de Gueventter aho izay nilaza tamiko hoe: “Tena hitako eto fa maranitsaina ianao. Maninona ianao raha mianatra matematika? ” Nisalasala aho, nanontany tena aho hoe inona no ho hitako. Saingy nandresy lahatra ahy izy ary nampiseho ahy fa raha manomboka mianatra matematika aho ka raha tsy tiako izany dia mbola manana fotoana foana aho hianarana asa hafa. Tsy nahafantatra izany mihitsy aho raha tsy nanandrana.
Rehefa niditra tamin'ny hazakazaka aho dia tsy nahalala olona, ​​fa tany aho no nihaona tamin'ny olona hafa toa ahy ka nahatsapa ho toy ny tompon-tanàna avy hatrany.
Maro ve ny vehivavy tao rehefa niditra ianao?
Vitsivitsy ihany ny vehivavy, fa ny mahafinaritra dia betsaka kokoa ny vehivavy tamin'ny matematika taona maro lasa izay. Misy sary iray tamin'ny taona 1940 izay mampiseho ireo mpahay matematika tamin'izany fotoana izany, ary vehivavy ny ankamaroan'izy ireo. Vitsivitsy kokoa ny vehivavy rehefa nanomboka aho, tsy nisy mpampianatra akory tamin'izy ireo.
Nanao ahoana ny fiatrehana asa amin'ny matematika tamin'ny fotoana tena sarotra ho an'i Arzantina nandritra ny fitondrana jadona miaramila, sy niainana ny maha-reny sy ny doctorat miaraka?
Nandany taona maro aho nitady ny lalako. Fony aho nanomana ny mari-pahaizana doctorat tamin'ny fanohanana ara-bola avy amin'ny CONICET [Sampan-draharaha iray natokana ho fampiroboroboana ny siansa sy ny teknolojia any Arzantina] no teraka ny zanako vavy. Taty aoriana, rehefa nahavita ny toham-pikarohako (these) aho dia teraka ny zanako lahy. Tsy nisy e-mailaka, mbola kely ny zanako, tsy ampy ny karama, tsy nividy gazetiboky izahay sady tsy nisy olona nandeha nitondra izany avy any ivelany, ka nandany valo taona teo ho eo aho nitady ny fomba hialana eto mba hahitako izay azo atao. Fotoan-tsarotra tokoa tamin'izany.
Inona ireo sakana hafa natrehinao nandritra ny fotoana lava niasanao? Mihevitra ve ianao fa nisy ifandraisany tamin'ny iray na maromaro tamin'ireny ny mombamomba anao, toy ny maha lahy/vavy na ny zom-pirenena?
Ny lavitra torohay/vaovao no sakana lehibe indrindra sendra ahy, tsikaritro taona maro taty aoriana rehefa niezaka ho any amin'ny ivontoeram-pampianarana fizika teorika iray tany Italia aho. Nandre zavatra maro momba ny matematika izay tsy fantatro aho nandritra ny fotoanako tany. Indray andro, raha nipetraka tao amin'ny efitrano malalaky ny Centro Internazionale di Fisica Teórica de Triste aho dia nahatsapa fa raha nanana vaovao izay hitako tany aho dia efa afaka nanomboka niasa tamin'ny zavatra manokana mialoha kokoa. Noho io antony io no nanokanako ny androko sisa amin'ny fikarohana vaovao.
Nisy sakana hafa koa avy eo, nefa tsy nahoako izany. Tsy noeritreretiko mihitsy, ohatra, fa misy zavatra azon'ny lehilahy atao ara-tsaina izay tsy vitan'ny vehivavy. Vao tsy ela akory izay no nahatsiarovako ny tantara iray niaraka tamin'ny mpampianatra sy mpiara-miasa tao amin'ny oniversite izay, nahitana ahy niaraka tamin'ny zanako vavy valo na folo volana tao amin'ny birao, hoy izy tamiko: “Manan-janakavavy ve ianao? Inona no asa ataonao eto? Tsy maintsy mody ianao ary mikarakara ny zanakao vavy.” Tsy niraharaha izany aho tamin'izany fotoana izany. Heveriko fa raha misy olona mieritreritra fa misy zavatra tsy vitany dia tsy ho vitany izany.
Inona ny matematika aminao, ary inona no ifandraisany amin'ny fiainana andavanandro?
Mihoatra noho ny manisa na manao kajy ny fanaovana matematika, saingy zava-dehibe izany. Fahatakarana ny firafitra sy fahafahana maminavina izany. Fitsipika tsy mitsaha-mivoatra ary misy amin'ny zavatra rehetra manodidina antsika io. Angamba tsapantsika izany rehefa manombatombana na mampitaha ny vidin-javatra isika na rehefa manitatra na mampihena nahandro iray, fa ny finday ihany koa, ohatra, dia mila ny matematika mba ahafahany miasa!
Midika inona ho anao ny loka nomen'ny Fondation L'Oréal sy ny UNESCO anao tamin'ny sokajy “Ho an'ny vehivavy ao amin'ny siansa” ho an'ny faritra Amerika Latina sy Karaiba?
Fantatro fa voatendry aho, saingy nieritreritra aho fa tsy ho afaka handresy mihitsy satria tsy malaza ny matematika. Gaga aho rehefa niantso ahy ry zareo, tsy fantatro ny dikan'ilay loka. Fifaliana lehibe manokana ho ahy izany ary tsapako niaraka tamin'izay fa loka ho an'ny matematika io satria matetika ny matematika no taranja tsy tolorana loka lehibe. Fa ankoatra izay, heveriko fa fotoana mety indrindra izany ho dokambarotra novokarin'ilay loka mba ho hitan'ny tovovavy maro fa natao ho azy ireo ny matematika, ary mifandray amin'ny fihetsem-po mihoatra ny noeritreretin'izy ireo izany.
Misy tetikasa mbola miandry ny ivoahany ve?
Manana olana vitsivitsy tiako hovahana aho. Soa ihany fa manerantany ny matematika, ara-piarahamonina kokoa fa tsy araka ny iheverana azy amin'ny ankapobeny, ary ahafahako miara-miasa amin'ny olona maro avy any Arzantina sy avy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Ny fifandraisana amin'ny olona no ipoiran'ny hevitra sy hamokarana bebe kokoa amin'ny asa. Farany, amin'ny matematika, ary amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, rehefa manana olana ianao dia tsara kokoa ny tsy mamaky ny lohanao amin'ny rindrina, fa manandràma kosa zavatra isankarazany hamahana izany.
Misy torohevitra ho an'ny mpikaroka hafa ve na ho an'ireo vehivavy te-hitrandraka ny sehatry siansa “exact”?
Ny tsy hanivananao tena no torohevitro, raha tianao izany, aza misalasala ary araho ny zava-tianao fatratra.